रुसले बनाएको विश्वकै खतरनाक हतियार, जसले पुरै बेलायत-फ्रान्स र आधा अमेरिका ध्वस्त पार्न सक्छ ! « Sajha Page
रुसले बनाएको विश्वकै खतरनाक हतियार, जसले पुरै बेलायत-फ्रान्स र आधा अमेरिका ध्वस्त पार्न सक्छ !
रुससँग अर्को शक्तिशाली हतियार सुखोई T-50 लडाकु जेट पनि छ । यो लडाकु जेटलाई कुनै पनि राडारले ट्र्याक गर्न सक्दैन । हावाबाट जमिनमा प्रहार गरिने हतियार बोक्ने यो सुखोई T-50 २४ सय किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा सम्म हावामा उड्न सक्छ ।